Raha kely indrindra dia olona 29 no maty tamin'ny fifanosehana am-bavaka an'i Liberia
Nilaza ny polisin'i Monrovia fa farafahakeliny 29 no maty tamin'ny fifanosehana tamin'ny fivoriam-bavaka kristianina tao an-drenivohitr'i Liberia ny alakamisy teo, ary ahiana ny mety hiakatra ny isan'ny olona.
Nilaza ny mpitondra tenin'ny polisy Moses Carter fa vonjimaika ny isan'ny maty ary “mety hitombo” satria olona marobe no ao anatin'ny toe-javatra sarotra. Nampiany koa fa anisan’ireo maty ny ankizy.
Ny minisitry ny fampahalalam-baovao lefitra Liberia dia nanome ny isan'ny maty.
"Nilaza ny dokotera fa olona 29 no maty ary ny sasany dia ao anaty lisitra mitsikera," hoy i Jalawah Tonpo, niantso tamin'ny radiom-panjakana avy amin'ny hopitaly akaiky.
"Andro mampalahelo ho an'ny firenena izao," hoy i Tonpo nanampy.
Notaterin'ny fampahalalam-baovao ao an-toerana ny alakamisy teo fa tao amin'ny fivoriana natao teo amin'ny kianja filalaovana baolina kitra tao New Kru Town, avaratr'i Monrovia no nitrangan'ilay loza nandritra ny alina. Tsy fantatra mazava izay tena nahatonga ny fifanosehana.
Ny antsipirihan'ny loza dia nijanona ho tsy misy dikany. Araka ny tatitra avy any an-toerana, fivoriam-bavaka kristianina ilay hetsika – fantatra any Liberia amin'ny anarana hoe “crusade” – natao tao amin'ny kianja filalaovana baolina kitra tao New Kru Town, tanàna ambanivohitr'ireo mpiasa ao an-drenivohitra.
Ny Vaomiera Eoropeana dia manangana famatsiam-bola amin'ny fandefasana vaksiny any Afrika
Previous Tapitra izao ny areti-mifindra! Ny FITUR ve no nahatonga ny fieritreretana indray ny fizahantany maneran-tany?
Manaraka Voampanga ho nanao piraty fiaramanidina tao amin'ny Fitsarana Federaly Amerikana ny manampahefana Belarosiana